ကျန်းမာရေး (A-Z) | Page 11 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
13.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
သွေးအားနည်းရောဂါ (Anaemia) ဟာ အများဆုံးတွေ့ရသော သွေးရောဂါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သွေးနီဥ မလုံလောက်လျှင် (သို့) သွေးနီဥများကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်လျှ...
လိပ်ခေါင်းရောဂါ (Haemorrhoid / Pile)
8.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
လိပ်ခေါင်းရောဂါဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
စအိုနဲ့စအို၀မှာရှိနေတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ရောင်ရမ်းဖောင်းပွလာတဲ့အခါ လိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ...
အသည်းရောင် အသားဝါ C ပိုး
7.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အသည်းရောင် အသားဝါ C ရောဂါဟာ Hepatitis C Virus (HCV)) ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ C ပိုးနှင့် ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါမျာ...
1.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အဆုတ်ရောင်နမိုးနီးယားဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုး၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်တွင်းရှိ လေအိတ် များ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရောဂါပိုး၀င်ရောက်လာခြ...
လေဖြန်းခြင်း (Transient Ischemic Attack)
27.6.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
လေဖြန်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်တွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော သွေးစီးဆင်းမှုတွင် အမှားအယွင်း တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တခါ...
10.6.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တနည်းအားဖြင့် ဆီးအိမ်ထိန်းချုပ်မှု ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ ရယ်မောတဲ့အခါမ...
ထိပ်ကပ်နာ (Actue Sinusitis)
9.6.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
Acute Sinusitis (ထပ်ကပ်နာ) ဆိုသည်မှာ နှာခေါင်းအတွင်းရှိ လိုဏ်ခေါင်း(လေခိုအိတ်) များ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ထိုသို့ရောင်ရမ်းခြင်းကြ...
အူကျရောဂါ ( Inguinal Hernia )
8.6.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
►► အူကျရောဂါဆိုတာဘာလဲ ?
၀မ်းဗိုက်ပိုင်းကို ဓားနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အူတွေကို မမြင်ရသေးခင်၊ အူတွေရဲ့ အပေါ်မှာ (Omentum) လို့ခေါ...